IHuawei P30 Pro iyakuhlala ilensi yentsimbi ye "super zoom" | I-Androidsis
Iifoto ezivuzayo ze Huawei P30 Pro Ezivele kutshanje ziveze ukuba izakufika kunye neekhamera ezintathu ezibekwe ngasemva. Kwakukho ngaphambili oko i-smartphone inokuxhasa ukusondeza kwe-10x.
Ngoku, ngokwe Android Central, I-VP yeHuawei yeNtengiso yeMveliso yeHlabathi uClement Wong ukuqinisekisile oko iP30 Pro iza kufika nekhamera ye-periscope-zoom yekhamera eya kuthi ibonelele nge "super zoom".
El Huawei P20 Pro Kunyaka ophelileyo kunikezelwe ukusondeza okubonakalayo kwe-3X ukuya kuthi ga kwi-5X zoom zoom. Ngelixa uWong engakhange aqinisekise ngeenkcukacha ezichanekileyo zokusondeza iP30 Pro, kucingelwa ukuba izakunika ukuya kwi-10X zoom. Umphathi we-Huawei u-Richard Yu wabelane ngomfanekiso wenyanga ethathwe ne-P30 Pro kwiveki ephelileyo.
Ukusondeza okukhulu kweHuawei P30 Pro
Ukuhanjiswa kweHuawei P30 Pro kutyhile oko ifaka imodyuli yekhamera kathathu kwikona ephezulu ngasekhohlo kwepaneli esemva. Ecaleni kwayo inzwa ye-3D (Ixesha leNdiza), i-laser autofocus kunye ne-flash ezimbini ze-LED. Kucingelwa ukuba ikhamera ye-periscope inokuba sisenzwa sesithathu ukuba siyile isikwere. Echaza ubungangamsha bokufota kweP30 Pro, uWong uthe iya kubonelela "ngento engazange yenziwe mntu ngaphambili."
IHuawei P20 Pro yanconywa ngokusebenza kwayo ngokukhanya okuncinci. UWong ukuqinisekisile oko IP30 Pro iya kubonelela ngamava okukhanya okungcono asezantsi. I Google Pixel 3 kunye nezinye iifowuni ezibonelela ngokufota ebusuku ngokusekwe kwi-software-based algorithms.
Ikhamera kathathu yeHuawei P30 Pro ayivelwanga
Isigqeba songeze ukuba imo yasebusuku yeP30 Pro iya kuba ngcono kuneendlela ezikhuphisana nesoftware. Oku kubonisa ukuba IP30 Pro iya kuxhotyiswa ngezixhobo zekhamera ezizodwa.
I-Huawei P30 kunye ne-P30 Pro ii-smartphones zibekelwe ukuba zibekho igosa ngoMatshi 26. Zombini ezi zixhobo ziya kuthi zixhotyiswe ngemiboniso ye-OLED, IKirin 980 SoC kunye nokuninzi. Kumsitho wokuphehlelelwa siya kuzazi zonke iinkcukacha zezi zinto, kubandakanya necandelo labo lokufota.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Igosa: iHuawei P30 Pro iya kuhlala ilensi yentsimbi ye "super zoom"